Uhambo lwe-imeyili oluya ebhokisini lokungenayo | Martech Zone
ULwesine, April 26, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Sivele sixoxa ngokuqeqeshwa kokuqukethwe kokuqukethwe kwewebhu namuhla nenkampani kazwelonke kanjani ukwakheka kwe-imeyili nokusebenza kwe-imeyili kushintshile ngenxa yendlela amaklayenti ahlinzeka ngayo nokuthi amadivayisi eselula anikela kanjani nge-imeyili. Njengoba kufundwa ama-imeyili angama-30% kuselula, kubaluleke kakhulu kunakuqala ukuklama ama-imeyili akho ngokufanele… futhi uwahlole!
Ukunikezwa kwe-imeyili kusengahamba kabi, noma kuhlonyiwe ngalolu lwazi. Yenza umkhuba wokuhlola yonke imilayezo oyithumela kumakhasimende amakhulu we-imeyili ngaphambi kokuyithumela. I-Litmus inikeza izinsuku ezingu-7 isilingo sokuhlola i-imeyili kukho konke okubhaliselwe okusha!
Baphinde bahlanganisa le infographic ewusizo emgwaqweni i-imeyili eya nayo ku-Inbox, yini engahambi kahle, nokuthi ungayilungisa kanjani!
Tags: ukulethwaimeyiliukukhishwa kwe-imeyiliuhambo lwe-imeyiliUkunikezelwa kwe-imeyiliukuhlolwa kwe-imeyili